Rehefa torina amin’ny olona rehetra ny filazantsara
"Any hotorina amin'izao tontolo izao ity fiiazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany." - Mat. 24:14.
"Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy no anirahako anareo kosa". Isika dia nantsoina hijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana araka izay isehoany ao amin'ny Jesôsy , tahaka izay nataon'i Jesôsy sy ny Apostoly. Amin'ny fitokiana amin'ny herin'ny Fanahy Masina no tokony hanambarantsika ny famindrampo sy ny fahatsarana ary ny fitiavan'ilay Mpamonjy izay nohomboana sy nitsangana tamin'ny maty , ary amin'izany dia ho iraka hanaisotra ny haizina ao an-tsain'ny olona maro isika ary hahatonga fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra hisandratra avy amin'ny fo maro. Misy asa lehibe tokony hataon'ny zanakalahy sy ny zanakavavin'Andriamanitra tsirairay.-RH, 25 Jona, 1895.
Ireo izay tsy manaiky ny hafatra miezinezina fampitandremana farany ho an'izao tontolo izao dia hanolana ny Soratra Masina; hanohitra sy hanao fanambarana sandoka momba ny finoana sy ny foto-pinoan'ireo izay miaro ny fahamarinan'ny Baiboly izy ireo. Hampiasan'izy ireo ny fomba rehetra hamiliana ny fifantohana. Fampisehoana, lalao, hazakaza-tsoavaly sy fialam-boly samihafa no hampiasaidny fahavalo. Hisy hery lehibe hanetsika azy ireo hanohitra ny hafatry ny lanitra (...)
Andeha isika hivondrona ao ambany fanevan'i Imanoela Mpanjakantsika, ary hiatrika ny ady amin'ny alalan'ny herin'ny Jesôsy . Maro ireo fanahy efa tandindomin'ny fahafatesana. Tsy maintsy ampahafantarina azy ireo ny momba ny famonjena (...) Maro ireo izay hita fa voageja ao anatin'ny haizin'ny tsy fahalalana, voahidy ao anatin'ny fefy tsy azo ihoarana (...) kanefa tsarovy fa ny iraky ny lanitra dia miara-miasa amin'ny olombelona. Afaka mamakivaky ny rindrin'ny tsy finoana ny Fanahy Masina. I Jesôsy no mitarika ny tafiny eo amin'ny sahan'ady (...) Ilay Jeneralintsika no mitarika antsika ho amin'ny fandresena. .- RH, 2 Oktobra 1895.
Rehefa mamao ny asa notendrena ho azy ny mambra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, eo amin'ny saha mila izany eo an-toerana sy any ivelany, ka manatanteraka ny asan'ny filazantsara nampanaovina azy, dia vetivety dia handre izao tontolo izao manontolo ary hiverina eto an-tany amin-kery sy voninahitra lehibe Jesôsy Tompo_ - VM, t. 99. Andriamanitra no hanatanteraka ny asa raha atolotsika Azy ho fitaovana eo am-pelatanany ny tenantsika. - TFC 9:107.